Fetim-pirenena : Nisantatra ireo hetsika samihafa ny Carnaval de Madagascar -
AccueilRaharaham-pirenenaFetim-pirenena : Nisantatra ireo hetsika samihafa ny Carnaval de Madagascar
17/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raikitra amin’izay. Manomboka miditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fety ny Malagasy amin’ny fiatrehana ny fetim-pirenena. Nanomboka omaly ary nisantatra ireo hetsika samihafa ny « Carnaval de Madagascar », izay tanterahina eny amin’ny araben’ny fahaleovantena. Nanombohana ny hetsika ny filaharambe nitety ny araben’ny fahaleovantena. Manodidina ny 3.700 ireo nandray anjara tamin’izany ary maro tamin’izy ireo no avy any amin’ny faritra, avy amin’ny fikambanana samihafa… « Antananarivo, Malagasy miara-paly » rahateo no lohahevitry ny hetsika ary samy nampiseho izany ireo mpandray anjara.
Tranoheva 50 kosa no manemitra ny araben’ny fahaleovantena ary misongadina amin’izy ireny ny fanehoana ny kolontsaina sy ny asa-tanana mampiavaka ny faritra tsirairay. Hita any anatin’ireny tranoheva ireny ny fampirantiana ny kolontsaina, ny fomba nentin-drazana, ny fomba fiaina sy fomba fitafy, ny sakafo, ny asa-tanana ary ireo kolontsaina mampiavaka ny faritra tsirairay.
Etsy ankilan’izay, kotaba tanteraka ihany koa ny eny amin’ny araben’ny fahaleovantena ary tsy ifandrenesana ireo fanamafisam-peo mandeha amin’ireo sehatra samihafa ho an’ity hetsika ity. Nisy ny fampisehoana niarahana tamin’i Mika sy Davis ary Dat’Kotry. Ny alina kosa dia nisy ny seho takariva niarahana tamin’i Samoëla .
Hitohy anio ary tsy hifarana raha tsy ny alahady ny « Carnaval de Madagascar ». Ankoatra ireo fampirantiana, dia mbola ho avy hanafana ireo sehatra ny tarika Mahaleo, Théo Rakotovao…
Miteraka fahasorenana ho an’ireo mpivezivezy amin’iny faritra iny ny nanapahana ny araben’ny fahaleovantena ho tsy azo idiran’ny fiara. Mitohana izay tsy izy, araka izany, ny fiara mihazo ireo lalana hany sisa azo haleha ka tsy maintsy handehanan’ny rehetra. « Mety vao maika hampalaza io hetsika io ny fisian’ny mpandalo amin’iny arabe iny ohatran’ny mahazatra. Hahasarika mpitsidika hafa ny fahafahan’ny fiara mandalo eny », araka ny soso-kevitry ny mpampiasa lalana iray. « Tsy hain’ny tanànan’Antananarivo mihitsy ny mampiaraka ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Faty antoka iray lavaka no ateriky ny fitohanana nefa tsy afa-manoatra fa tsy maintsy mankaty », hoy ihany izy. Vokatr’io fitohanana io dia manao izay danin’ny kibony ihany koa ireo taxibe ka mandeha amin’izay lalàna hitany fa malalaka.
Asa fa tsy kabary, ary ny fametrahana ny fisandratana 2030 no efa lahasan’ny Filoham-pirenena ankehitriny, satria dia efa nambarany fa eny ifotony no hitondrana izany asa izany. Noho izany dia nisy ny fihaonan’ny Filoham-pirenena tamin’ireo ...Tohiny